ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးသူများ သတိထားသင့်သော ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုး (၁၀) ချက် | OnDoctor
By Ei Cho Dr.	 On May 3, 2019 Last updated Sep 6, 2019
သင်သည် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်လှလှလေးစီးကာ နေ့စဉ်ကျောင်းတက်၊ ရုံးတက်ပြုလုပ်နေပါသလား?
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အလှကို ဒေါက်ဖိနပ်တရံက များစွာအထောက်အပံ့ပေးသော်လည်း မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဒေါက်ဖိနပ်တရံက မည်သို့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သလဲဆိုတာကို သင်သိပါသလား?
Pencil heel မှ စီးချင်သူများအတွက် အောက်ပါဆိုးကျိုးများဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ဒေါက်ဖိနပ်စီးခြင်းသည် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် ဖက်ရှင်ကျစေပါတယ်။ Sexy ကျလှပကာ စတိုင်အပြည့်ဖြစ်စေပါတယ်။ သို့သော် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကတော့ အပြည့်အဝမခံစားရနိုင်ပါ။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးထားလျှင် သင့်ခြေဖဝါးကို အလုံးစုံအထောက်အပံ့မရစေနိုင်ပါ။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်သည် တကိုယ်လုံးအလေးချိန်ကို ဟန်ချက်ညီမထိန်းနိုင်သောကြောင့် ခြေဖဝါးနာကျင်မှု၊ ရာင်ရမ်းမှုနှင့် ကျောအောက်ပိုင်းနာကျင်မှု စသောဆိုးကျိုးများ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ချွန်မြနေသော ဒေါက်ဖိနပ်စီးခြင်းရဲ့ နောက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုကတော့ ခြေသလုံးကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက်သားတောင့်တင်းကာ သွေးကြောများ ဖောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ကြွက်သာတောင့်တင်းမှု သက်သာရန် ဒေါက်ဖိနပ်စီးခြင်းရှောင်ပါ။
ဒေါက်ဖိနပ်ရဲ့ ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးသည် စတိုင်ကျစေရန် တီထွင်ထားကြပါတယ်။ စတိုင်ကျသော်လည်း သက်တောင့်သက်သာ မရှိသောဒေါက်ဖိနပ်ကို ရေရှည်ဝတ်ဆင်သောအခါ ခြေဖဝါးကျိန်းစက်ကာ ခြေချောင်းနှင့် ခြေဖဝါးစသည့်နေရာတွင် စူးစူးသကဲ့သို့ နာကျင်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒေါက်ဖိနပ်ဝတ်ကာ မြေပြင်ညီလမ်းပေါ် လျှောက်လှမ်းရသည်မှာ အဆင်ပြေနိုင်သော်လည်း မညီညာသောလမ်းနှင့် ကျောက်ခဲလမ်းလျှောက်ရပါက ခြေမနောင့်နာကျင်မှုဒဏ် အမြဲခံရနိုင်ပါတယ်။ ခြေဖနောင့်နာရုံသာမက ခြေချော်လဲပါက ခြေဖနောင့်ကျိုးခြင်း၊ တံတောင်ဆစ်နှင့် ဒူးခေါင်းညိုမဲခြင်းစသည့် ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေပါတယ်။ ကို့ရိုးကားယားပြုတ်ကျပါက ပြင်းထန်သောထိခိုက်မှု ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးခြင်းသည် ကျောရိုးကွေးကောက်စေသော အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒေါက်ဖိနပ်အမြင့်သည် ကျောရိုးအကွေးနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါတယ်။ ကွေးကောက်နေသော ကျောရိုးကြောင့် ကျောကုံးအပေါ်အောက် အောင့်ခြင်းကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒေါက်ဖိနပ်စီးထားလျှင် ကိုယ်နေဟန်ထား ပိန်သကဲ့ ရှည်သကဲ့သို့ ဖြစ်စေသော်လည်း ဖိနပ်ကြောင့် ခြေဖဝါးဒဏ်ဖြစ်ကာ သွေးကြောကျဉ်းစေပါတယ်။ ဆိုးရွားသော အခြေအနေတစ်ခုရောက်လျှင် သွေးကြောပေါက်သည်အထိ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ခြေမတူကဲ့သို့ဖြစ်လာခြင်းသည် ဒေါက်ဖိနပ်စီးခြင်းကြောင့် ဆိုးကျိုးရကြောင့်လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝမကျသောခြေဖဝါး၊ ခြေသလုံးကြွက်သားဒဏ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် သွေးကြောပျက်ဆီးခြင်းကြောင့် ခြေဖဝါးပုံပျက်ခြင်းဖြစ်စေပါတယ်။
ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးခြင်းကြောင့် ခြေထောက်အရွတ်များ အားနည်းစေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မိမိခြေထောက်ကို သက်တောင့်သက်သာမရှိသော ဖိနပ်စီးခြင်းကို ရှောင်ခြင်းဖြင့် ခြေဖဝါးဒဏ်ရာရခြင်းကို ကာကွယ်ပါ။
ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးခြင်းကြောင့် ဒူးဆစ်အပေါ်သို့ဒဏ်ပိလာပြီး အဆစ်အမြစ်ရောင် ကိုက်ခဲခြင်းဖြစ်သည်အထိ ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်။
(10) ခြေချောင်းများ တရားလွန်ဆန့်ကားနေခြင်း
ဒေါက်ဖိနပ်ကို အချိန်ပြည့်စီးလျှင် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာသောအခါ ခြေချောင်းများသည် အမြဲဆန့်နေသည့် ဆိုးကျိုးခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် အထက်ပါဖော်ပြပါ ဒေါက်ဖိနပ်စီးခြင်း ဆိုးကျိုးများကို သိရှိပြီးနောက် ဒေါက်ဖိနပ်စီးခြင်းအစား သက်တောင့်သက်သာရှိသော ဖိနပ်များကိုသာ ရွေးချယ်စီးရန် ကျန်းမာရေးရှု့ထောင့်မှ ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်မိမိ အဆုံးစီရင်မည့်သူဟုတ်မဟုတ် သိနိုင်သည့်…